ကိုယ်ခံပညာသင်ယူရင်းနဲ့ နောက်ထပ်ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာမလဲ -
Posted on March 9, 2018 Author Sugar Cane	Comment(0)
Posted on January 3, 2017 Author
ဒေါက်ဖိနပ် မစီးဘဲလည်း မနေနိုင် တစ်နေကုန် စီးပြီးသွားရင်လည်း ခြေထောက်တွေနာကျင်နေပါသလား??? ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းလေးကတော့..??? အလှအပမက်တဲ့ မိန်မသားတို့အဖို့ ဒေါက်ဖိနပ်ဆိုတာ ရူးသွပ်စရာတစ်ခုပါ။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးလိုက်ရင် စမတ်ကျသွားသလို ခံစားရပြီး ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေတိုးစေပါတယ်။ စီးထားတုန်းမှာ ယုံကြည်မှုတွေပေးသော်ငြားလည်း ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နာကျင်မှုတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲနာနာ “အပြစ်မမြင်ပါဘူး စီးချင်တာပဲ သိတဲ့နောက်….”ဆိုပြီး စီးမြဲစီးဆဲ ပျိုမေတို့အတွက် နာကျင်မှုလေး သက်သာအောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင့်.။ ဒေါက်ဖိနပ် စီးတဲ့အခါတိုင်း အကြည်ရောင် ဆေးဆယ်လိုတိပ် (သို့) ဆယ်လိုတိပ် နဲ့ ခြေခလယ်နဲ့ ခြေသန်းကြွယ်ကို ပတ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဟာ နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အရမ်းလွယ်တယ်ဟုတ်? မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့များ သံသယရှိနေလေသလား?လုံးဝ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သိပ္ပံနည်းကျဖြေရှင်းချက်ပါ။ ခြေခလယ်နဲ့ ခြေသန်းကြွယ်ကြားမှာ ဖြာထွက်နေတဲ့ အာရုံကြောလေးတွေအပေါ် ဖိအားတစ်ခု […]
Posted on March 11, 2019 May 16, 2019 Author Hnin Ei Oo
လုံးဝထိရောက်တယ်ကွာ နှင်းအာမခံတယ် 😎😎😎